Procreate dia havaozina mba hifanaraka amin'ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny processeur M1 | Vaovao IPhone
Procreate dia havaozina mba hifanaraka amin'ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny processeur M1
Iray amin'ireo fampiharana sary Ny procreate feno indrindra anio ho an'ny iPad dia ny Procreate, fampiharana iray izay misaotra ny fikarakaran'ireo mpamolavola azy, dia mandray asa vaovao tsy tapaka, ny sasany amin'izy ireo dia zatra ny fiasa vaovao ampiharin'i Apple amin'ny fitaovany.
Vao nanambara i Procreate fa nanavao ny fampiharana iPad ho mifanentana tanteraka amin'ny iPad Pro 2021 miaraka amin'ny processeur M1, fanavaozana izay hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'izany amin'ny fampisehoana avo kokoa ary koa manitatra ny isan'ny sosona ahafahanao miasa.
Na dia marina aza fa navoaka tamin'ny volana lasa ny fanavaozana ity fampiharana ity, dia tsy nanararaotra ny herin'ny M1 vaovao an'i Apple. Araka ny filazan'ny mpamolavola, Procreate for the iPad Pro 2021 dia manolotra a fampisehoana hatramin'ny avo 4 heny Ho fanampin'izany, mamela ny fiasa miaraka amin'ny sosona 115 miaraka amin'ny sary amin'ny famahana ny 4K amin'ny 132 DPI.
Tsy toy ny rindranasa hafa misy amin'ny iPad, Tsy mila famandrihana ny Procreate afaka mampiasa azy. Tsy mila mandoa 10,99 euro fotsiny isika hahazoana izany. Manolotra Procreate Pocket ihany koa, kinova natao ho an'ny iPhone izay manana vidiny 5,49 euro.
Araka ny nambaran'ny orinasa tamin'ny volana lasa teo, ny fanavaozana manaraka izay horaisin'ilay fangatahana dia hampidirina ao asa mifandraika amin'ny zava-misy mitombo ary fanatsarana ny fidirana amin'ny fidirana.
Raha nanao Procreate fitaovana ilaina amin'ny asanao ianao ny iPad misy anao izao dia fohy kely amin'ny heriny, mety tsy hevitra ratsy ny mieritreritra ny hahazo ny iPad Pro 2021 vaovao, na ny 11-inch na ny 12,9-inch. Tokony ho tadidinao fa ny maodely tokana misy efijery mini-LED dia ny maodely 12,9-inch.
Halaviro kitapo€ 4,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Procreate dia havaozina mba hifanaraka amin'ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny processeur M1
Ny odyssey mahavariana amin'ny fisintomana fanavaozana ao amin'ny Apple Watch Series 3
Ahoana ny fomba famoahana indray ireo rindranasa novidina teo aloha tamin'ny iOS